विदेशबाट मिस्डकल आयो ? कल ब्याक नगर्नुस् ! | Sagarmatha TV
काठमाडौं । तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ ।